Firefox 89 ichasvika mushure menguva yaitarisirwa, nekuda kwekuchinja dhizaini? | Linux Vakapindwa muropa
Firefox 89 ichasvika gare gare pane zvaitarisirwa, pamwe nekuda kwekuchinja dhizaini
Mozilla inoburitsa inogadziridza kune yayo webhu bhurawuza vhiki ina dzese uye neChipiri. Aya ndiwo maitiro anga akaita kwenguva yakareba, zvekuti handicharangarira kekupedzisira pavakazviita zvakasiyana. Ehe, ivo vanogona kuburitsa inogadziridza kugadzirisa chero nguva, asi mitsva shanduro inotevera chirongwa. Izvi hazvina kuitika muchikamu chekupedzisira, icho chakarongerwa kwenguva yakareba nezuro, Kubvumbi 20, uye chakapihwa kwatiri neMuvhuro, 19. Firefox 89 Uye kunyangwe pasina chirevo chepamutemo, tinogona kufungidzira kuti sei.
Iyo kambani inozivikanwa nekuvandudza iyo gava browser Ini ndakanga ndaronga kugadzirisazve iyo 90th vhezheni zvimwechetezvo, asi pakupedzisira vanozoiendesa mberi mavhiki akati wandei. Kugadziriswazve kwakanzi Proton, uye pakati pezvimwe zvinhu kunounza mweya wemhepo yakachena kumufananidzo weFirefox. Iko kutaridzika kutsva kwave kutowanikwa mubeta, iyo izvozvi inowirirana neFirefox 89, asi ichi chikamu ichasvika kune yayo yakagadzikana vhezheni yatove muna Chikumi uye kwete pakati paMay sezvaitarisirwa pakutanga.
Firefox 89 iri kuuya muna Chikumi
Mavhiki apfuura, moto gava v88 yanga yakarongerwa kutanga muna Kubvumbi 20, sezvatataura, uye Firefox 89 yaifanirwa kusvika mavhiki mana gare gare, muna Chivabvu 18. Asi kana tikatarisa iyo firefox kuburitsa peji, ikozvino rimwe zuva rinowanikwa, zvakare neChipiri, asi vhiki mbiri gare gare kupfuura zvaitarisirwa. Pasina chinyorwa chinotsanangudza kana kutsvaga chero chinhu mukukurumidza kuona kuforamu yavo, tinogona kufunga kuti chinangwa cheMozilla ndechekuyedza dhizaini nyowani kwenguva yakareba kuti uve nechokwadi chekuti zvese zvinofamba mushe.
Sezvatinoverenga mutsamba ye beta kuvhura, dhizaini ichaunza shanduko ku:
Yakareruka browser chrome uye toolbarYakawandisa kana isinganyanyo shandiswa mashandiro anozobviswa kutarisisa pazvinhu zvakakosha zvekufamba.
Mamenyu akareruka: Zvemukati zvichagadziriswa uye nekuiswa pamberi maererano nekushandisa kwayo. Ivo vachaderedza ruzha rwekuona nekubvisa zvisina basa iconography uye nekupa yakajeka mavara.
Yakagadziriswa ziviso: Infobars uye hunhu zvichave neyakajeka dhizaini uye yakajeka mutauro.
Nyowani yakafuridzirwa eyelash dhizaini: Iwo ari akayangarara mabhu achava neruzivo uye zvekunyepedzera masaini pazvinenge zvichidikanwa, senge zvinoonekwa zvinongedzo zvekuteerera zvinodzora. Dhizaini yakatenderedzwa yeiyo inoshanda flange inobatsira kutarisa uye kuratidza mukana wekuti nyore kufambisa iyo flange sezviri kudikanwa.
Kukanganisa kushoma: Ivo vachabvisa zvisina basa zviyeuchidzo uye mameseji.
Zvimwe zvinobatana uye zvakadzikama zvinoonekwa: Yakareruka iconography, yakanyanya kucheneswa pendi pendi, uye yakatowirirana manyorerwo munzvimbo yese saiti.
La inotevera vhezheni ichave Firefox 90, parizvino paChannel yehusiku, uye achaburitswa mavhiki mana kusiyana neshanduro yapfuura neChipiri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Firefox 89 ichasvika gare gare pane zvaitarisirwa, pamwe nekuda kwekuchinja dhizaini
Mune yazvino vhezheni yeshanduro yekushandura yakashandisa iyi nyowani dhizaini yeUI, ini ndanga ndichishandiswa.
Ini handina kuyedza iyo Dev vhezheni, asi iripo pane beta chiteshi uye ivo vari kuzivisa kare.
Linux maapplication neGUI anouya kuWindows 10, kana iwe uri wekupinda mukati